YCL မော်တာ - BaganMart
swimming pool Pump with Hair catcher
Vertical Multi Stage Electric Water Pump Pedrollo
အဆောက်အဦးများအတွက် Marshalling Kiosk Panel
PI8100 Series Vector control ဗို့ထားထိန်းစက်
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 806 view counts
Brand : VIDA
Model : YCL Series
လုပျငနျးအမညျ : Group Of KZY Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 02-60124, 02-60125, 09-43888880
နရောဒသေ : မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး
Speed : Constant Speed
Current (A) : 7.2
Eff(%) : 73.2
Speed (r/min) : 2880
YCL series single-phase heavy-duty capacitor start asynchronous motor is suitable for driving small lathe and water pump, especially good for families and workshops where only single-phase power is available. This series motors are designed with advanced technique and made of fine materials. It also has many other good characteristics such as nice function. lower noise, lower temperature-rise and starting current, higher starting torque, reliable operation, easy maintenance and nice appearance. The YCL series motor is produced in conformity with IEC standards.YC series electric motor is used to drive small size machine, especially for household and workshop where only need single phase power supply.
VIDA အမှတ်တံဆိပ် စက်ပစ္စည်းများအား ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်လီ၊လက်ကား ကို GROUP OF KZY CO.,LTD မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေပါသည်။ ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်ခြင်း၊ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အားလုံးအတွက် အာမခံပါရှိခြင်း၊ မြို့တွင်းအိမ်အရောက်ပို့ပေး၍ နယ်မှမှာလျှင် ကားဂိတ်အရောက်ပို့ပေးခြင်း၊ မည်သည့် Bank နှင့်မဆို ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Brush Cutter4stoke 139F (ဘေးလွယ်မြက်ရိတ်စက်)
Cut-Off Machine 63551 ( ၁၄လက်မ ဖြတ်စက်)
Electric Drill A1Z-16 (၁၆ ဖောက်စက်)
For YCL မော်တာ
May I get the quotation for "YCL မော်တာ" ?